ထိုင်းထီ ဘတ်သန်း၉၀ ပေါက်တဲ့ အမျိုးသမီးမွေးနေ့ ထူးဆန်းစွာကျင်းပ – Daily Feed MM
ထိုင်းထီ ဘတ်သန်း၉၀ ပေါက်တဲ့ အမျိုးသမီးမွေးနေ့ ထူးဆန်းစွာကျင်းပ
Admin_John | July 14, 2020 | International News | No Comments
ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒွန်ဌာနနီခရိုင် ကုမ္ဖဝါပီမြို့နယ် နောင်ဝါ့ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်နောင်ဟိယ တွင်နေထိုင်သူ Miss. Wannaree Panyasai သည် ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူမ၏ အသက် ၄၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် သူမနေထိုင်သည့်ပ်ကွက်သူ ရွပ်ကွက်သား ၃၀၀၀ ခန့်ကို ဖိတ်ကြားကာကြွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ပြီး ဝေဟင်မှနေ၍ Paramotor ၁၀ စီးဖြင့် သူမလက်မှတ်ပါသော ရွှေတစ်မတ်သား ဆွဲကြိုး ၃၀ ကုံးရဲ့ဘောက်ချာ နှင့် ဘတ်ငွေ ၂၀ တန် များ ကို ကြဲချပေးခဲ့ပါ
တယ် ။သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ထွက်သွားတဲ့ ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ၁၅ စောင်တွဲ ၊ ဘတ်သန်း ၉၀ ပေါက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုလိုသူမရဲ့မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရအဖြင့် Hilight အဖြင့် အမျာပြည်သူကို သူ့လိုကံကောင်းစေချင်လို့ဆိုပါတယ် ။မွေးနေ့လာကြသူအများပြည်သူများကို မြို့နယ်ကျမ္မာရေးဌာနမှ တစ်ဦးချင်းကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး Mask များလည်းပေးဝေခဲ့ပါတယ် ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူး Suraphon
Thoung Ngean ကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာ အင်အား ၁၀ ဦးအပါ အခြားအဖွဲ့ဝင်များမှလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ရွှေဘောက်ချာကောက်ရသူတွေအနေနဲ့ သူမထံမှာလာရောက်ပြီး ရွှေတစ်မတ်သားနဲ့လဲလှာ်ထုတ်ယူရ
ပါတယ် ၊ သူတို့တွေပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုလေးတွေကိုမြင်ရတာပီတိဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ စုစုပေါင်း တန်ဘိုး ဘတ် ၃ သိန်းရှိပါတယ် ။
ထိုင္းႏိုင္ငံ အူဒြန္ဌာနနီခ႐ိုင္ ကုမၹဝါပီၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဝါ့ေက်း႐ြာအုပ္စု ဘန႔္ေနာင္ဟိယ တြင္ေနထိုင္သူ Miss. Wannaree Panyasai သည္ ယေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ သူမ၏ အသက္ ၄၈ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔တြင္ သူမေနထိုင္သည့္ပ္ကြက္သူ ႐ြပ္ကြက္သား ၃၀၀၀ ခန႔္ကို ဖိတ္ၾကားကာေႂကြးေမြးဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ေဝဟင္မွေန၍ Paramotor ၁၀ စီးျဖင့္ သူမလက္မွတ္ပါေသာ ေ႐ႊတစ္မတ္သား ဆြဲႀကိဳး ၃၀ ကုံးရဲ႕ေဘာက္ခ်ာ ႏွင့္ ဘတ္ေငြ ၂၀ တန္ မ်ား ကို ႀကဲခ်ေပးခဲ့ပါ
တယ္ ။သူမဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ထြက္သြားတဲ့ ထိုင္းထီ ပထမဆုႀကီး ၁၅ ေစာင္တြဲ ၊ ဘတ္သန္း ၉၀ ေပါက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုလိုသူမရဲ႕ေမြးေန႔မွာ အမွတ္တရအျဖင့္ Hilight အျဖင့္ အမ်ာျပည္သူကို သူ႔လိုကံေကာင္းေစခ်င္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ေမြးေန႔လာၾကသူအမ်ားျပည္သူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္က်မၼာေရးဌာနမွ တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး Mask မ်ားလည္းေပးေဝခဲ့ပါတယ္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမႉး Suraphon
Thoung Ngean ကိုယ္တိုင္ဦးစီးကာ အင္အား ၁၀ ဦးအပါ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွလုံၿခဳံေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ေ႐ႊေဘာက္ခ်ာေကာက္ရသူေတြအေနနဲ႔ သူမထံမွာလာေရာက္ၿပီး ေ႐ႊတစ္မတ္သားနဲ႔လဲလွာ္ထုတ္ယူရ
ပါတယ္ ၊ သူတို႔ေတြေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးမႈေလးေတြကိုျမင္ရတာပီတိျဖစ္မိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ၊ စုစုေပါင္း တန္ဘိုး ဘတ္ ၃ သိန္းရွိပါတယ္ ။
ရွှေညောင်ပင်က ၂ လုံး ၊ ၃ လုံး တွေ အထင်အရှားပေးနေလို့ လူပေါင်း များစွာ ပေါက်ကုန်ပြီ
အောင်လအန်ဆန်ကို ၂ ချီ နဲ့ အပြတ်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ နယ်သားလန်သား ဒီရစ်ဒါ (ရုပ်သံ)
ရုပ်ဆိုးလို့ အဆက်အဆံ မလုပ်ကြပေမယ့် အသက် ၈၀ ဖခင်ကြီးကို ရှာကျွေးနေတဲ့ ဦးလေး
အိမ်သာထဲမှာ ဖုန်းသုံးတတ်သူတွေအတွက် ကြောက်စရာ ရောဂါတစ်မျိုး
ဆောင်းငရုတ်အထွက်ကောင်းဖို့ စိုက်ပျိုးရမယ့် နည်းလမ်း
ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ကြက်သွန်နီကို ပြုတ်ပီးသုပ်စားဖူးကြလား
ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့ ကားဝယ်မယ်ဆို ဒီအချက်တွေကို သေချာစစ်ပါ
မြေကွက်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေ သေချာစစ်ဆေးပါ